Soomaaliya oo ku dhawaaqday xaalad musiibo qaran oo abaarta darteed ah. Saadaasha Shabakadda
Isbedelka cimilada ayaa kordhiya soo noqnoqoshada iyo muddada abaaraha. Wadamo badan ayaa ku dhawaaqaya digniin biyo la'aan waxayna bilaabayaan inay balaariyaan qorshayaashooda waxqabad iyagoo wajahaya biyo la'aan xagaaga soo socda.
1 Musiibo qaran
2 Tirada dadka ay saameysay
Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Waxay ku dhawaaqday xaalad "musiibo qaran" inay awood u yeelato inay wajaho xaalada biyo la’aaneed ee ay keentay abaarta daran ee ku habsatay dalka intiisa badan. Iyagoo wajahaya abaar baaxaddaas le'eg, maamullada waa inay u gudbaan habab biyo-ba'an oo ba'an. Yaraynta iyo xitaa baabi'inta nadaafadda waddooyinka, biyo goynta, yareynta cadaadiska, iwm.
Maxamed wuxuu u sameeyay bulshada Soomaaliyeed baraarujin ah inay si deg deg ah uga jawaabaan aafooyinkaas. Biyo la'aantu ma keento oo keliya saboolnimo, laakiin cudur siyaaday, gaajo, iwm Intaas waxaa sii dheer, wuxuu ugu baaqay ganacsatada dalkiisa iyo dadka Soomaaliyeed ee dibad jooga ah inay kaqeyb qaataan howlaha dib u soo kabashada ee goobaha ay dhibaatadu saameysey.
Tirada dadka ay saameysay
Waxaa jira ilaa 3 milyan oo Soomaali ah oo ay saameysay abaartan waxayna ku sugnaan doonaan xaalad deg deg ah cunno bisha lixaad ee 2017. Tani waxay sababi kartaa macluul inta badan dalka sababo la xiriira biyo la'aanta waraabka iyo dalagyada.
Madaxweynuhu wuxuu si isdaba joog ah u helayaa warbixino ku saabsan qiimaynta iyo jawaabta ay tahay inuu ku helo xaalad degdeg ah oo sidan oo kale ah. Abaarta ayaa barakicisay in ka badan 135.000 oo qof oo ku nool Soomaaliya ilaa iyo bishii Nofembar, sida lagu sheegay xog ay ururiyeen Hay'adda Qaxootiga ee Qaramada Midoobay (UNHCR) iyo Golaha Qaxootiga Norway (NRC).
Hay'adaha caalamiga ah waxay ka baqayaan in xaaladdan abaarta daran ay dhaliso macluul soo saarta qiyaastii 250.000 oo dhimasho ah sidii dhacday sanadkii 2011.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Abaaraha » Soomaaliya waxay ku dhawaaqday xaalad musiibo qaran oo abaaraha ka dhalatay
Fulkaanaha Etna ayaa qarxay